ओलम्पियन हरिको फुटबलर बन्ने सपना: खेलाडीसँग १२-२७ कुरा | Hamro Khelkud
ओलम्पियन हरिको फुटबलर बन्ने सपना: खेलाडीसँग १२-२७ कुरा
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– मध्यम दुरीका धावक खेलाडी हरि रिमालले राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा भाग लिएको झन्डै एक दशकमा विश्व खेलकुदकै सबैभन्दा ठूलो खेल मेला ओलम्पिकको पछिल्लो संस्करण रियो ओलम्पिकमा भाग लिएका थिए।
दुई बर्षअघि १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा ५ हजार मिटर दौडमा कांस्य पदक जितेका हरिलाई ओलम्पिक सहभागिता खेल जीवनको अविष्मरणीय क्षण लाग्छ । धादिङको फुलखर्कमा जन्मेका २९ बर्षे हरिले पछिल्ला केही बर्षमा घरेलु प्रयिोगितामा एक छत्र राज गर्दै आएका छन् । भाग लिएका अधिकांश प्रतियोगितामा उनी विजयी बन्दै आएका छन् । सानै उमेरदेखि फुटबल खेलाडी बन्ने सपना देखेका हरि २०६३ मा नेपाली सेनामा आबद्ध भएपछि एथलेटिक्सतर्फ गएका थिए । उनै हरिसँग हाम्रो खेलकुद डट कमका दिपेश तिमलसिनाले गरेको १२–२७ कुरा गरेका छन् ।
– स्कुलमा हुँदा देखिनै खेल्थें, २०५७/५८ साल देखिनै स्कुलमा फुटबल, दौडमा भाग लिन्थे।
– म खेलकुदमै लाग्छु भन्ने महसुस भयो। आफ्नो रुचि खेलकुदमै रहेकोले यसमै होमिएर ईच्छा पुरा गर्न सक्छु भन्ने भयो।
३. एथलेटिक्समा कसरी लाग्नु भयो?
– म सुरुमा काठमाण्डौ आउँदा फूटबल खेलाडी बन्छु भन्ने थियो र विकास मल्लले १-२ पटक फ्रेन्ड्स क्लबमा पनि लैजानु भयो। तर ३-४ महिनापछि एउटा दौडमा सहभागिता जनाउँदै जित्न सफल भए। उक्त प्रतियोगितामा राष्ट्रिय खेलाडीहरु पनी सहभागी थिए र त्यसपछि यसमै जम्छु भन्ने भयो।
– सामसुङ एस ७, ७६ हजार रुपैयाँ
– हिरो होन्डा, १लाख ७०हजार रुपैया। आर्मीको वर्ष खेलाडी भएपछि पुरस्कार स्वरूप पाएकोले यहि चढ्छु।
– आर्मीको तलब र पुरस्कार गरेर वार्षिक ९-१०लाख पुग्छ।
– म आर्मी भएपछि खेलाडी भएको हुँ, त्यसैले खेलाडी नबनेको भए आर्मीनै बन्थे।
– १२ कक्षासम्म पढेको छु।
– खेलकुद, कमेडी र हौसला प्रदान गर्ने फिल्म हेर्छु। पछिल्लो पटक हेरेको भाग मिल्खा भाग। यो फिल्म मैले धेरैपटक हेरिसकें।
– आमिर खान, नायिका यही भन्ने छैन।
– आतिफ अस्लम, गायिका यही भन्ने छैन।
– खासै रुचि राख्दिन गीतमा, प्रशिक्षणको बेलामा चाहीं गित बजाएर गर्छु। धेरै थरिको सुन्छु ठ्याक्क यहि भन्ने छैन।
– रिलेसनमा छु।
– सामान्य ज्ञान र प्रेरणा दिने किताब पढ्छु। पछिल्लो पटक पढेको ‘कसरी सफलता प्राप्त गर्ने?’।
– १२/१३ ओटा भन्दा धेरै देश पुगेको छु। मन परेको देश जापान त्यहाँ एसियन च्याम्पियन्सिपमा पुगेको थिए। हङकङ पनि मन पर्यो।
– पोखरा। र उपत्यका नजिक नगरकोट।
– शरीरलाई हानि नगर्ने सबै कुरा खान्छु, बेस्ट भन्ने छैन।
– बनाउछु। मैले बनाएको चिकेन करी सबैलाई मनपर्छ।
– सामन्यतया दिनको डेढ घण्टासम्म चलाउँछु। फुर्सदमा र काम परेको बेलामा चलाउने हो। प्रेम प्रस्ताब ठ्याक्कै आउदैन, कसैबाट प्रस्ताब आउनु अगाडीनै पछाडी हट्छु।
– जागिर खाएर पाएको पैसा यो गरे भन्ने याद छैन। वि.सं. २०६४को एनआरएन म्याराथनमा सातौं स्थान हासिल गरेर पाएको रकमले ५ हजार पर्ने स्पाइक्स जुत्ता किनेको थिए।
– खेलभित्रको राजनीतिले गर्दा ओलम्पिक खेल्न नपाउने सम्भावना थियो, तर पछि खेल्न पाउने भएपछि निकै खुसी भए। ओलम्पिकमा पुगेपछि मैले जिम्मेवारी बढेको महसुस गरिरहेको थिएँ र देशको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुनाले निकै खुसी थिएँ।
– साथीहरु सँग घुम्छु, रमाइलो गर्छु।
– पढाई अघि बढाउन सकिन।
२४. राष्ट्रिय टोलीमा सबैभन्दा मिल्ने साथि र माथि आउन सक्ने खेलाडी?
– म सबैभन्दा बढी याम साजन सुनारसँग मिल्छु। माथि आउन सक्ने खेलाडी सोम बहादुर कुमाल। उनमा ८ सय मिटर र १५ सय मिटरको राष्ट्रिय कीर्तिमानहरु भंग गर्ने क्षमता छ।
– बेलायतका मोहम्मद फराह।
– संघमा कुनैपनि व्यक्ति हाबी हुनु हुँदैन। संस्थामा राम्रो कार्यप्रणालीको बिकास गर्नुपर्छ। खेलाडीहरुलाई उचित सुबिधा दिन पर्यो, खेलाडीलाई राम्रो डाईटको व्यवस्था गर्न पर्छ। जुनियर लेभल देखिनै स्तरोन्नतिको प्रयास गर्न पर्यो।
– मलाई रामो भन्ने र नराम्रो भन्ने दुबैले मलाई माथि जान सहयोग गर्नु भएको छ। राम्रो भन्नेले हौसला प्रदान गर्नु भयो र खुट्टा तान्न खोज्नेहरुबाट ईख राख्दा मलाई माथि जान सहयोग गर्यो।